WINDOWS 7 WEATHER NGWA - WINDOWS - 2019
Na-arụ ọrụ na ngwaọrụ igwe na Windows 7
Mmehie kachasị mma mgbe ị na-arụ ọrụ na Windows bụ BSOD - "ákwà nchara na-acha anụnụ anụnụ nke ọnwụ". Ha na-ekwu na ọdịda dị egwu na-eme na usoro ahụ na iji ya eme ihe agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na enweghị nlọghachị ma ọ bụ nchịkọta ọzọ. Taa, anyị ga-ele anya iji dozie otu n'ime nsogbu ndị a site na aha "CRITICAL_SERVICE_FAILED".
Nchọpụta nsogbu CRITICAL_SERVICE_FAILED
Na-asụgharị ederede na-acha anụnụ anụnụ dị ka "Error Service Error". Nke a nwere ike ịbụ nrụrụ ọrụ nke ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala, yana agha ha. Ọ na-emekarị nsogbu ahụ mgbe ị wụnye ngwanrọ ọ bụla ma ọ bụ mmelite. E nwere ihe ọzọ kpatara - nsogbu na draịvụ ike usoro. Site na ya ma kwesiri ịmalite idozi ọnọdụ ahụ.
Usoro 1: Lelee Disk
Otu n'ime ihe maka mmalite nke BSOD nwere ike ịbụ njehie na diski buut. Iji kpochapụ ha, ị kwesịrị ịlele ụlọ ọrụ Windows ahụ wuru. CHKDSK.EXE. Ọ bụrụ na usoro ahụ nwere ike ịkpụ, ị nwere ike ịkpọ ngwá ọrụ a kpọmkwem site na GUI ma ọ bụ "Iwu iwu".
Gụkwuo: Na-agba ọsọ diagnostics diski na Windows 10
Na ọnọdụ ebe nbudata na-agaghị ekwe omume, ị ga-eji ebe mgbake ahụ na-agba ọsọ "Iwu Iwu". Nchịkọta nhọrọ a ga - emeghe mgbe ihuenyo na - acha anụnụ anụnụ na - enweghị ihe ọmụma.
Anyị pịa bọtịnụ ahụ "Nhọrọ Di elu".
Anyị na-aga na mpaghara "Nchọpụta nsogbu na Nchọpụta nsogbu".
N'ebe a, anyị na-emeghekwa ogige ahụ "Nhọrọ di elu".
Meghee "Iwu Iwu".
Anyị na-amalite njirimara disk console na iwu ahụ
Biko gosi anyị ndepụta nke akụkụ niile na disks na usoro.
Anyị na-achọ usoro diski. Ebe ọ bụ na ịba uru na-agbanwekarị akwụkwọ mpịakọta ahụ, ị ​​nwere ike ịchọpụta ókè ị chọrọ. N'ihe atụ anyị, nke a "D:".
Ugbu a, anyị na-amalite ịlele na dozie njehie na iwu kwekọrọ na abụọ arụmụka.
chkdsk d: / f / r
Lee "d:" - akwụkwọ ozi ụgbọelu, na / f / r - arụmụka na-ekwe ka ịba uru iji dozie ndị na-agbajikwa ndị ọrụ na mmemme mmemme.
Mgbe usoro ahụ zuru ezu, pụọ na njikwa.
Anyị na-agbalị ịmalite usoro. Mee ka ọ dị mma gbanyụọ wee gbanye kọmputa ọzọ.
Usoro 2: Iweghachite mmalite
Ngwaọrụ a na-arụ ọrụ na ebe mgbake ahụ, na-elele ma dezie ụdị njehie niile na-akpaghị aka.
Mee omume ndị a kọwara na paragraf nke 1 - 3 nke ụzọ gara aga.
Họrọ nkwekọrịta kwesịrị ekwesị.
Anyị na-eche ka ngwá ọrụ ahụ rụchaa, mgbe ahụ, PC ga-amalitegharịa ozugbo.
Usoro 3: Iweghachite site na isi
Ihe nkwụghachite bụ disk diski pụrụ iche nwere data gbasara ntọala na faịlụ Windows. Enwere ike iji ya ma ọ bụrụ na enyerelarị usoro nchebe. Ọrụ a ga-emezi ngbanwe niile e mere tupu otu ụbọchị. Nke a na-emetụta ntinye nke mmemme, ọkwọ ụgbọala na mmelite, yana ntọala nke "Windows".
Gụkwuo: Rollback na ebe nchekwa na Windows 10
Usoro 4: Wepụ mmelite
Usoro a na-enye gị ohere iwepu akara ọhụrụ na mmelite. Ọ ga enyere aka na ikpe ebe nhọrọ na ntụpọ adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ na ha anaghị efu. Ị nwere ike ịchọta nhọrọ ahụ n'otu ebe mgbake ahụ.
Biko mara na omume ndị a ga-egbochi gị iji ntuziaka na usoro 5, ebe a ga-ehichapụ folda Windows.old.
Hụkwa: Wepu Windows.old na Windows 10
Anyị na-enyefe ihe 1 - 3 nke ụzọ ndị gara aga.
Pịa "Wepu mmelite ".
Gaa na ngalaba nke egosiri na nseta ihuenyo.
Push bọtịnụ "Wepụ Nwelite Ngwa".
Anyị na-eche maka ịmecha ọrụ na mmalitegharịa kọmputa.
Ọ bụrụ na njehie ahụ kwughachi, megharịa ihe na ndozi.
Usoro 5: Nke gara aga
Usoro a ga-adị irè ma ọ bụrụ na ọdịda emee oge, ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ usoro ma anyị nwere ike ịnweta ya. N'otu oge ahụ, a malitere ịhụ nsogbu mgbe ọghachị ụwa ọzọ nke "ọtụtụ".
Mepee menu "Malite" ma gaa na mpaghara. Otu ihe ahụ ga-enye ụzọ mkpirisi keyboard Windows + M.
Gaa na mmelite na nchekwa.
Gaa taabụ "Iweghachite" ma pịa bọtịnụ ahụ "Malite" na ngọngọ ka ịlaghachi na mbipute gara aga.
Usoro nkwadebe dị mkpirikpi ga-amalite.
Anyị na-etinye aka n'ihu ihe kpatara ya maka mgbake. Ọ dịghị mkpa ihe anyị na-ahọrọ: nke a agaghị enwe mmetụta na ọrụ ahụ. Anyị pịa "Na-esote".
Usoro ga-enye ịlele maka mmelite. Anyị na-ajụ.
Jiri nlezianya gụọ ịdọ aka ná ntị. A ghaghị ịkwụ ụgwọ nlezianya pụrụ iche na faịlụ ndabere.
Ịdọ aka ná ntị ọzọ banyere mkpa ọ dị icheta paswọọdụ akaụntụ gị.
Akwadebe nkwadebe a, pịa "Laghachi na nwube mbụ".
Anyị na-eche maka mmecha nke mgbake.
Ọ bụrụ na ngwá ọrụ ahụ nyere njehie ma ọ bụ bọtịnụ "Malite" adịghị arụ ọrụ, gaa na usoro ọzọ.
Nzọụkwụ 6: Weghachite PC na ala mbụ ya
N'okpuru isi iyi a ga-aghọta na steeti nke usoro ahụ dị ozugbo echichi. Usoro nwere ike na-agba ọsọ ma site na-arụ ọrụ "Windows" na site na mgbake na gburugburu.
Gụkwuo: Iweghachi Windows 10 na ala mbụ ya
Usoro 7: Ntọala Ụlọ ọrụ
Nke a bụ nhọrọ mgbake Windows ọzọ. Ọ na-egosi nwube dị ọcha na ichekwa akụrụngwa nke ngwanrọ nke onye na-emepụta, na igodo ikike.
Gụkwuo: Anyị na-alaghachi Windows 10 na ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Ọ bụrụ na ngwa nke ntụziaka dị n'elu adịghị enyere aka ịnagide njehie ahụ, ọ bụ naanị nrụnye ọhụrụ nke usoro sitere na mgbasa ozi kwesịrị ekwesị ga-enyere aka.
Gụkwuo: Esi tinye windo Windows ma ọ bụ disk
Na mgbakwunye, ị kwesịrị ịṅa ntị na diski ike, nke edere na Windows. O nwere ike ịbụ na ọ naghị arụ ọrụ ma chọrọ nchọta.
Gbanyụọ firewall na Windows XP
Otu esi edekọ ụda na Skype
Ntugharị nke DOC ka FB2 ederede akwụkwọ
Dozie nsogbu site na imechi kọmputa gị na Windows 10
Ịdebanye foto ma ọ bụ "stampụ" na-eji ndị ọkachamara Photoshop iji chebe ọrụ ha site na izu ohi na iji iwu eme ihe n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ebumnuche ọzọ nke mbinye aka bụ ime ka ọrụ ahụ mata. Isiokwu a ga-agwa gị otu esi edepụta stampụ gị na otu esi echekwa ya maka iji ya mee ihe n'ọdịnihu. Ná ngwụsị nke ihe mmụta ahụ, ngwa ngwa dị mfe, nke a ga-eji dị ka ihe na-egosi mmiri na ụdị ihe ịrịba ama ndị ọzọ ga-apụta n'arịa ụlọ ọrụ gị. GụKwuo
Otu esi edozi ngwa ngwa nke ndi nlekota ulo na komputa: ntuziaka zuru oke
Ezo esi zoo peeji nke VK na-adọrọ adọrọ